लक्षण नदेखिएका कोरोना सङ्क्रमितलाई घरमै राख्ने तयारी - Bibechana Bibechana
लक्षण नदेखिएका कोरोना सङ्क्रमितलाई घरमै राख्ने तयारी
२ जेष्ठ २०७७ ०८:४१ ||
झापा– सरकारले कोरोना सङ्क्रमित मध्ये सबै विरामीलाई अस्पतालमा नराख्ने भएको छ । लक्षणविहीन तथा सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई अस्पतालमा नराखिने भएको हो । त्यस्ता बिरामीलाई क्वारेन्टाइन वा घरमै बस्न अनुरोध गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्काल स्रोत उपलब्धतामा आधारित स्थितिको वर्गीकरण गर्दै यस्तो तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले बताए । एक सय जना संक्रमित भए तीन जनालाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की बताउँछन् । उनले अधिकांश संक्रमितलाई उपचार आवश्यक नपर्ने बताए ।
मन्त्रालयले १ लाख जनासम्म संक्रमितलाई धान्न सक्ने गरी क्षमता विस्तार गरेको छ । लक्षणसहित संक्रमित भएकाहरूको संख्या बढ्दै गए लक्षणविहीन संक्रमितलाई अस्पतालमा नराख्ने योजना मनत्रालयको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कम्तीमा ५ लाख ४८ हजार क्वारेन्टाइनको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने जनाएको छ । हाल ५३ हजार ८ सय २३ वटा क्वारेन्टाइन छन् । देशभर तीन हजार ७६ आइसोलेसन बेड, एकहजार ५ सय ९५ आईसीयू बेड र ८ सय ४० भेन्टिलेटर उपलब्ध छन् ।